IGNOME 3.38 iza kuza nomsunguli wesicelo esenziwe ngokutsha | Ubunlog
I-GNOME 3.38 iya kuthumela ngesiqalisi sesicelo esenziwe ngokutsha esingazukubandakanya ithebhu "Rhoqo".
IPablinux | | gnome, Ubuntu
Ukuba ucinga ngokufanayo nam, GNOME 3.38 izakwazisa utshintsho oza kuluthanda. OkwangokuXa ucofa kwisiqalisi sesicelo se-Ubuntu, sinikwa iithebhu ezimbini: enye apho sibona khona zonke izicelo ezikhoyo kunye nenye ngokusetyenziswa rhoqo. Ngokwam, ndicinga ukuba ukhetho lwesibini luyaphazamisa yonke into kancinci, ngakumbi ukuba sijonga ukuba sinedokodo, kwaye abaphuhlisi kufuneka bavumelane nam, kuba le thebhu izakunyamalala kwiinyanga ezizayo.
Abaphuhlisi beprojekthi basebenza kwiinguqu ezimbini, eyokuqala kuzo kukubonelela kuphela kukhetho olusibonisa zonke usetyenziso. Njengangaphambili, ii-ayikhoni ziya kubekwa ngokulandelelana koonobumba, nangona singaziguqula ngokuthanda, okanye ubuncinci senze amafolda ukuze siwadibanise ngendlela esithanda ngayo. Olunye utshintsho abasebenza kulo zingaphi iiapps eziza kubonisa kwiphepha ngalinye.
Isiqalisi soSetyenziso seGNOME 3.38 siza kubonisa usetyenziso oluninzi kwizikrini ezinkulu
Nangona bengakhange bathathe isigqibo ngenani okwangoku, i-GNOME 3.38 ayisayi kuhlala ibonisa usetyenziso olufanayo. Inani elithe ngqo leapps eziza kuboniswa liya kuxhomekeka kubungakanani kunye nokusonjululwa kwescreen. Ukuba sine-15.6 ″ isikrini esine-1920 x i-1200 resolution sizakubona ii-icon ezininzi kunokuba sisebenza kwi-10 ″ screen nge-1376 x 768 resolution, all thanks to a umphathi omtsha womaleko. Ukufezekisa oku, utshintsho oluninzi luya kufuneka lwenziwe kwinqanaba lekhowudi, kodwa ikwavula indlela yokuphucula izinto kunye nokwenza yonke into ibe lulwelo ngakumbi.
Kwinguqu yesithathu engabalulekanga kangako, njengoko sibona emfanekisweni awabelana ngawo OMG! Ubuntu!, ngoku i imida ephezulu neyasezantsi inkulu kakhulu, into ekuya kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa ukubona ukuba iyaphela yile ndlela ku-Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla okanye igcina umfanekiso wangoku. Ukujonga umfanekiso-skrini odlulileyo, akufuneki silibale ukuba Ubuntu busebenzisa i-GNOME, kodwa iiCanonical zigcina ezinye iindlela zokwenza idokodo elihlala lonke icala lasekhohlo.
Ngokubhekisele kwiifolda, kukho utshintsho lwesine: ngoku zizicelo ze-3 × 3, eyenza i9 iyonke. Ukuba sifuna ukubona isicelo seshumi, sinokufikelela kuso ngokuya kwiphepha elitsha.
IGNOME 3.38 iyeza Ekupheleni kukaSeptemba kuhlobo lwayo oluzinzileyo kwaye yindawo yemizobo ethi Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla izakubandakanya ngo-Okthobha walo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-GNOME 3.38 iya kuthumela ngesiqalisi sesicelo esenziwe ngokutsha esingazukubandakanya ithebhu "Rhoqo".
Uthixo wam, woyikisa kangakanani
Damn, ukuba ingxaki ayisiyiyo ebonisa ii-icon ezingaphezulu okanye ezimbalwa, ingxaki kukuba umthumeli uhlala kwisikrini sonke. Kwisikrini esili-10 (umz
Andazi ukuba ngubani okanye ngubani owenza izigqibo kuyilo lwedesika, kodwa kufuneka bazitshise zonke. Esona sizathu sokuba ndikwazi ukusebenzisa iGnome-Shell kungenxa yolwandiso oluvula indlela yam.
Ibhotwe likaIsake sitsho
Kungenxa yoko le nto ndihlala ndisebenzisa ulwandiso lwemenyu yesicelo, enye andiyisebenzisi, xa ndingenakukhetha kodwa kukukhangela isicelo esingacalulwanga, bububhanxa. Ukuqaliswa kufuneka kuvule kwiscreen okanye ubeke endaweni yayo imenyu eyenza eyona ngqondo. kwaye enye iyishiyele izixhobo ezincinci okanye ezinobuchule.
Phendula uIsake Palacio
Ndicinga ukuba yiyo loo nto izakuziqhelanisa nobukhulu bescreen, leyo inemiphetho ebanzi ndicinga ukuba kufanelekile xa isetyenziswa ngezikrini ezinkulu kwaye yenza ii icon ukuba zigxile ngakumbi ekubeni iyimenyu epheleleyo yescreen
Oko ayikulungisi ingxaki. Kusengqiqweni ukuba ushukume kwiscreen sonke ukuvula isicelo, kwaye ukuba usebenzisa iphedi yokuchukumisa amava ayintlekele kwaye ayothusa.
Enye yezinto endiyikhumbulayo malunga noManyano kukusetyenziswa kwayo kwideshibhodi, iya kuphuma kwikona kwaye ihlale ngokwaneleyo (nangona ikuvumela ukuba uyibeke kwisikrini esipheleleyo, kodwa sele ikunike ukhetho oluninzi), ndiyathemba ukuba iCanonical yinike ukwenza into ngaloo ndlela kwimo yolwandiso lwe-GS.
Isisombululo esiliqili iya kuba kukunika umsebenzisi wokugqibela ithuba lokukhetha indlela yabo yokwenza ngokwezifiso kwaye ayilungiselele iDash yabo, ayinguye wonke umntu onomdla ofanayo. Le menyu yeyangoku kwaye intle kodwa kunzima ukukhetha phakathi kweeapps ezininzi kunye, (umbono) kufuneka ube nokwahlulahlula, kubunye kwakulula.
Xa uvula incwadi eneefoto ezinemifanekiso kunye neevidiyo, ngaphambi kokuba ndibenakho ukukhetha ukuzihlela ngohlobo, ngobungakanani okanye ngokwe-alfabhethi ... ukuvela. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angayalelwa njengangaphambili? Enkosi
Ujonge kwindawo engeyiyo. Endaweni yemenyu yokunqakraza ekhohlo, cinezela iqhosha lotolo kwibar ephezulu; Apho uyakufumana ukhetho lokuluhlela ngohlobo, igama, ubungakanani kunye nomhla wokulungiswa.
I-Qt 5.15 ilapha, iza nophuculo lwe-Qt ekhawulezayo ye-3D kunye nokunye
Iinyani ezili-10 ezinomdla ngoBuntu ekufuneka uzazi